Xasaasiyad isdabajoog ah oo lagu soo saaray falcelinta kiimikada ee polyvinyl butyral, una adkaysata falaadhaha ultraviolet, biyaha, saliidda, iyo gabowga.
Waxay ku milmi kartaa methanol, ethanol, ketones, alkanes halogenated, dareerayaasha udugga leh .. Waxay leedahay iswaafajin wanaagsan oo la leh phthalate, bacrimiyeyaasha sebacate sebasate, nitrocellulose, phenolic resins, epoxy resins, iwm. .. Ku dhegnaanta wanaagsan ee biraha, dhalada, alwaaxda, dhoobada, waxsoosaarka fiberka, iwm.
Khamriga Polyvinyl wuxuu ku milmaa biyo, iyo butyraldehyde iyo kiciyaha sida hydrochloric acid ama sulfuric acid ayaa lagu darayaa iyadoo qasaysa, falcelinta acetal-ka waxaa lagu sameeyaa 15-50 ° C. Badanaa waxaa loo isticmaalaa soo saarida muraayadaha lakulmay, rinjiga iyo xabagta. Noocyo badan oo qalab ah, sida: muraayad, bir, caag, alwaax, maqaar iyo waxyaabo kale ayaa leh dhejis adag. PVB leh hufnaan sare. Adag adag. dabacsanaan. Waxqabadka heerkulka hooseeya. Waxay leedahay kala-firidhnaan heer sare ah iyo iswaafajin iswaafajinaya, iskudarka sifooyinka midabbada.
Polyvinyl butyral, oo ah isku-darka khamriga polyvinyl (PVA) iyo butyraldehyde, waa budo cad oo si fiican ugu dhegan biraha, dhalooyinka, alwaaxda, dhoobada, iyo waxsoosaarka fiber-ka. Dahaarka, muraayadaha badbaadada muraayadaha iyo qalabka dahaarka ayaa sidoo kale leh adeegsiyo kaladuwan, tan ugu caansanna waa isku-darka dhalooyinka amniga.
Nidaamka uumiga ee polyvinyl acetal, habab kala duwan ayaa loo isticmaali karaa. “Habka hal-tallaabada ah” waa in lagu daro dhammaan aldehydes-ka ku jira fal-falka ka dibna dhammaan hydrochloric acid; "habka laba-tallaabada ah" waa in lagu daro qaddar yar oo aldehydes ah ka dibna Ku dar dhammaan hydrochloric acid, ugu dambayntiina ku dar aldehydes haray; "habka isku midka ah" waa in lagu daro dhammaan aldehydes iyo hydrochloric acid ee fal-kiciyaha isla waqtigaas.